HGH Malezia | Aiza no hividianana hormonina mitombo ao Malezia ao Kuala Lumpur
HGH Malezia | Aiza no hividianana hormonina mitombo ao Malezia ao Kuala Lumpur?
100% HGH Somatotropin (HGH Somatotropin) ny vokatra vokarina ao Malezia
Isika dia mpaninjara ofisialy momba ny vokatra azo avy amin'ny hormone ao Malezia.
Inona io hormonina mitombo io?
Ny hormone fitomboana (hormone mitombo, STH, HGH, somatotropin) -
Ny hormonina peptide ao amin'ny volon'ny vozon'ny hôpitaly, dia ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena mba hamoronana ny fanampiana ara-tsaina.
Ny fahanterana ny vatana dia mifandray mivantana amin'ny haavon'ny hormone famelomana.
Amin'ny ankapobeny, aorian'ny 20 taona isaky ny 10 taona dia mihena ny halavan'ny famokarana amin'ny 15%.
Ny hormone mitombo dia tsy manana fahasamihafana ara-pananahana. Izany hoe, mitovy amin'ny lahy sy ny vavy ny haavony.
Na dia eo aza ny fampiasana zava-mahadomelina misy hormonina mitombo,
Voararan'ny WADO (Fikambanana manohitra ny doka),
Ao Malezia no amidy ireo vokatra ireo. Fampiharana fampiasana:
- Hery avo lenta,
- Anti-aging programa
Ny hormones dia zavatra voajanahary tena ilaina amin'ny fahasalamanao. Amin'ny taonany, ny votoatin'ny hormonina
Mihena tsikelikely izany, izay mitarika ho amin'ny fampidinana ny
ny fahanterana ary ny fisian'ny fifandraisany
Amin'ny taona marary. Ny fitsaboana hormonina voajanahary dia mamerina ny vatanao ho toy ny hormonina ronono, ary mamerina azy ireo amin'ny ambaratonga izay efa nahazatra ny vatanao nandritra ny taona maro.
Torohevitra ho an'ny mpandray anjara:
- Manomboka amin'ny 2IU isan'andro alohan'ny hatory (vavony foana).
- 5 andro sy andro 2.
- Manolo-kevitra ny hanova ny andron'ny maraina / hariva (isaky ny roa volana).